जोखिम लिएर काम गर्ने बानी : NepalChurch.com
यो तस्बिरमा देखिएको निर्मान गरिदै गरेको झोलुङ्गे पुल भेरी नदिमा निर्माण गरिदैछ्। गाडी कुद्‍ने बाटोबाट पनि निकै अग्लो देखिने झोलुङ्गे पुल बनाउने कामदारहरु कुनै सुरक्षाको लागि सहयोगी सामाग्री (Safety Equipment) प्रयोग नगरीकन बनाउँदैछन्। यतातिर न त ठेकेदारको ध्यान छ न त कामदारको नै। यस्ता निर्माण गरिने क्षेत्रहरूमा सुरक्षा विधि नअपनाइ काम गर्न नपाइने जस्ता नीति स्थानिय सरकारले बनाउने र कार्वान्वयन पनि गर्ने हो कि?
संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रदेश नं. ६ का केही भुभागहरूमा भौगोलिक विकटता र भौतिक पूर्वाधारको न्यून विकासकलेगर्दा यहाँका अधिकांस मानिसहरुकोजीवन कष्टकर रहेको छ। देश संघीयतामा गएपछि पहाडी भेगका जनताहरूमा विकास हुनेमा आशा पलाएको छ। ठाउँ ठाउँमा बाटो, पुलहरू निर्माण गर्न थालिएका छन्।
« म कहिल्यै बोलिन तर मेरा शब्दहरू पाना पानामा छन्
अझै पनि ढुवानी चौरीमा »